आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम !::Point Nepal
आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम !
असार, काठमाडौं । सूर्यग्रहणपछि सोमबार चन्द्रग्रहण लाग्नेछ । सूर्य ग्रहण नेपालबाट देखिएको थिएन । तर, चन्द्र ग्रहण भने नेपालबाट पनि देखिनेछ।
ग्रहणकालमा धेरै किसिसमका नकारात्मक तथा हानिकारक किरणको प्रभाव रहन्छ ।
यहाँ ग्रहणको बेलामा गर्न नहुने केही कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
पृथ्वी र चन्द्र कक्षहरू एउटा सतहमा नपरी ५ दशमलव १५ डिग्रीको कोण बनाएर ढल्किएका छन्। वर्षमा दुईवटा यस्ता अवसर आउँछन् जतिबेला चन्द्र कक्षका दुई आमने सामनेका छेउहरू पृथ्वीको कक्षसित मेल खान्छन्। अर्थात् सूर्य र पृथ्वी सित एकै सरल रेखामा पर्छन्। यी मेल खाएका स्थानहरू सूर्य र पृथ्वीबीचमा पर्न आउँछन्। त्यसबेला ग्रहण हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुशार जुन पूर्णिमा तिथीका दिन राहु अथवा केतुमा एक ग्रह चन्द्रमाको साथमा एकै राशिमा पर्न आउँछन् त्यस दिन चन्द्र ग्रहण हुन्छ।